IMF oo ka digtay qatar ku timaada bangiyada sanadaha soo socda - BBC News Somali
IMF oo ka digtay qatar ku timaada bangiyada sanadaha soo socda
Image caption Shiinaha ayaa loo arkaa inay ka imaanayso qatar amaah badan oo ay qaadatay awgeed
Hayadda lacagta adduunka ee IMF ayaa ka digtay qatar badan oo ku imaanaysa bangiyada sanadaha soo socda, inkastoo ay sheegtay in qataraha dhow ay dhamaadeen.
IMF ayaa sheegtay bangiyada inay haystaan lacag ka badan intii ay haysteen intuusan dhicin dhibaatada dhaqaalaha adduunka ee 2008-dii. Laakiin waxaa dhib ku ah siday u samayn lahaayeen faa'iido, taasoo qatar galinaysa dhaqaalahooda waqtiga dheer.
Warbixinta IMF ayaa ka digaysa amaahyada badan ee Shiinaha uu qaatay inay ku tahay qatar bangiyada.
Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah, lacagta dulsaarka oo yar waddamada horay u maray ee ay bangiyada ka shaqaynayaan. Faa'iido la'aanta waxaa ugu wacan sidoo kale dhaqaalaha waddamada horay u maray oo hoos u dhacay taasoo keenaysa inaan loo baahnayn lacag badan oo la amaahdo.
Dhinaca kale, suuqyada caalamka ayaa la qabsaday aftidii Britishka ay uga baxeen Midowga Yurub, sicirka qayraadka dabiiciga ee kordhay ayaa yareeyay walaacii laga qabay lacagaha soo gasha waddamada dhoofiya.